April 2013 ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
9:48:00 am USB ဆိုင်ရာ No comments
Memory Stick တွေမှာကြုံတက် တဲ့ပြသာနာလေးတွေ ပါဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလေးပြောပြမှာပါ… သိပြီးသား သယ်ချင်းတွေလဲ သည်းခံပြီး ဆက်ဖတ်ပေး ပါနော်… ကျွန်တော်လဲ လိုက်ပြီး မွှေနောက် ၇င်း တွေ့ ၇ှိ တာ လေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေး တာပါ------ အမှားပါခဲ့၇င် လဲ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ----
သူငယ်ချင်းတို လဲ ကြုံဖူးကြမှာပါ… Memory Stick ထိုးလိုက်တာနဲ့ .. Autorun.inf တို့Recycled.exe တို့Rundll32.exe တို့ …ဘာတို့ ညာတို့ ပေါ့… အဲဒီ virus တွေ့ ကို USB Disk Security မှာလာပြတယ်လေ.. အဲဒါတွေကို အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့… Kespersky ကတောင် မဖျက်နိုင်ဘူး… USB Disk Security မှာ Delete လုပ်လဲတစ်ချို့ ဟာတွေ ကို Delete လုပ်လို့ မရဘူးလေ…. အဲဒီတော့ ဘာ Software မှာသုံးစရာ မလို့ တဲ့ ဒီ နည်းလေးကို စမ်းသုံးကြည့် လိုက် ပါ...
အ၇င်ဆုံး Bat File နဲ့Command တွေရေးပြီးရှင်းတဲ့နည်းလေးပါ… ပထမဦးဆုံး Notepad တခုကိုဖွင့်ပါ..ပြီးရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့Command တွေကို Copy ကူးထည့် လိုက်ပါ…. @echo del: E:Autorun.inf del: F:Autorun.inf del: G:Autorun.inf del: H:Autorun.inf del: E:Recycled.exe del: F:Recycled.exe del: G:Recycled.exe del: H:Recycled.exe del: E:RUNDLL32.exe del: F:RUNDLL32.exe del: G:RUNDLL32.exe del: H:RUNDLL32.exe @echo ပြီးရင်တော့..နာမည်တစ်ခုခု .bat (eg. Kill.bat) ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့Memory Stick ထဲမှာ Save လိုက်ပါ… အဲဒီ Kill.bat ဆိုတဲ့ file လေးကိုတော့ ဖျက်ပစ်လို့မ၇ပါဘူး…. Stick ထိုးတိုင်း အဲဒီ file လေးကို double click လုပ်ပြီး run ပေး၇ပါတယ်-----
ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့Memory Stick ထဲမှာ virus တွေအကုန်ရှင်း သွား ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ခင်ဗျာ။။။
မင်းသား မင်းသ္မီး အကာင့်
4:52:00 am မင်းသား မင်းသ္မီး အကာင့် No comments
အဆိုတော် Rzarni ရဲ့ Email account က rzarnione@gmail.com ပါ။ သရုပ်ဆောင် ၀တ်မှုံရွှေရည် ရဲ့ Email account က wulthmone.sy@gmail.com ပါ။
အဆိုတော် ကြိုးကြာ ရဲ့ Email account က chitmyatnoethant@gmail.com ပါ။
သရုပ်ဆောင် သီရိရှင်းသန့် ရဲ့ Email account က wintlove@gmail.com ပါ။
ကိုဟန်ထွန်းရဲ့ huntunsinger@gmail.com ဆိုတာ တစ်ခုပဲရှိတယ်
hannwai1987@gmail.com - Jenny
star.supanhtwar@gmail.com - ဆုပန်ထွာ
cutie.nansu@gmail.com - နန်းစုရတီစိုး
chitmyatnoethant@gmail.com - ကြိုးကြာ ပါ..
Bambino အဖွဲ့က သီရိ နဲ့အိနွေ ရဲ့ gmail Ac လေးပါ
ဟန်ဇာမိုးဝင်း - hanzamoewin@gmail.com
ကိုရသကြီးရဲ့မေးလ်ကို ပြောပြပါမယ်..... mha.yatha@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်.
ဂျောက်ဂျက်မေးလ် က - joukjack.mha@gmail.com
ပန်းဖြူ = phyupan@gmail.com
လင်းနစ် ရဲ့ . . g-mail လိပ်စာလေးပါ
ကျော်ထွဋ်ဆွေ ရဲ့မေးက kyawhtutswe@gmail.com
မိုးဟေမာန်ခင်က miemie14@gmail.com ပဲဖြစ်ပါတယ်
မေစံပါညို mail ပါ maysbnyo@googlemail.com
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း အကောင့်က shinthentlwin @gmail .com ပါပဲခင်ဗျာ
မိုးယုစံရဲ့ အကောင့်က moeyusan@gmail.com
ကျော်ထွဋ်ဆွေ ရဲ့ အကောင့်နောက်တစ်ခုက awjawlan@gmail.com ပါ...
ကြုံတုန်း သူ့ကောင်မလေး အကောင့်ပါယူလိုက်နော် အဟီးးး julietfaith.nevadie@gmail.com တဲ့...
ကိုgtone အကောင့်က gtone2007@gmail.com ပါ...
ရဲလေးaccက ivxq1256@gmail.com ပါ
shinthentlwin@gmail.com ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ရဲ့ a/c ပါ....
ဒါကတော့...... ပရိတ်သတ် အသဲစွဲ အိုင်စီရဲ့ အဆိုတော် ကိုမျိုးကြီးအကောင့်ပါ တကယ့်အစစ်ပါ...
sutie.nansu@gmail.com ကတော့ နန်းစုရတီစိုးရဲ့ အကောင့်ပါ။
Facebook account အခိုးခံရပြီး password အချိန်းခံရပြီဆိုရင်.......
4:16:00 am facebook No comments
တကယ်လို့ Facebook အကောင့်အခိုးခံရပြီး ကိုယ့်ရဲ့ password ပါအချိန်းခံရပြီဆိုရင်တော့ ဒီအောက်ကနည်းလေး နဲ့သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ facebook အကောင့်ကိုပြန်ယူလို့ရပါတယ်...မေးလ်ကနေ၀င်ပြီး fackbook ကပေးတဲ့လင့်နဲ့ ၀င်ရတဲ့နည်းမဟုတ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့
facebook မှာ ၀င်ထားတဲ့ email account ပျောက်နေရင်လည်း ဒီနည်းလေးကအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်... email account ပါ
ပျောက်နေတဲ့ သူတွေကတော ဒီနည်းလေးနဲ့လုပ်လိုက်လို့ facebook account ပြန်ရပြီဆိုရင်တော့ http://www.edinooyin.com/profiles/blogs/gmail-account-facebook ဒီလင့်လေးမှာဝင်ဖတ်ပြီး သူငယ်ချင်း
တို့ရဲ့ Primary email ကိုပြောင်းပေးလိုက်ကြပေါ့နော်.. ကဲစမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင် facebook account ပြန်ယူဖို့ ဒီအောက်ကလင့်
၁) ပြီးရင် My Account Is Compromised ကိုကလစ်ပါ...
၂) Enter your email or phone number ရဲ့အောက်ကပျောက်သွားတဲ့ facebook မှာဝင်ထားတဲ့ email ကိုထည့်ပေးပါ ပြီးရင်
၃) အပေါ်ကပေါ်လာတဲ့အထဲက Facebook User ဆိုတာမှာ သင့်အကောင့်မှန်တယ်ဆိုရင် This Is My Account ကိုကလစ်ပါ....
၄) Current or Old Password မှာကိုယ်သုံးခဲ့တဲ့ပတ်စ်ဝပ်ကိုဖြည့်ပါ ပတ်စ်ဝပ်ဆိုတာက ယခင်က facebook အတွက်သုံးခဲ့တဲ့ ပတ်စ်ဝပ်
အဟောင်းဆိုရင်လဲရပါတယ်....ပြီးရင် Continue ကိုကလစ်ပါ...
၅) Secure Your Account လို့ပေါ်လာရင် Continue ကိုကလစ်ပါ....
၆) ပြီးရင် အဆင့်ဆင့်ပေါ်လာတဲ့ထဲက Createanew password ဆိုတဲ့အထဲမှာ New Password, Confirm Password မှာပတ်စ်ဝပ်အသစ်ဖြည့်ပေးပါ...Submit ကိုကလစ်ပါ..
၇) နောက်တဆင့် Please change your password လို့ပေါ်လာရင် Continue ကိုကလစ်ပါ..
၈) Account Verified Congratulations ဆိုတဲ့အဆင့်မှာ Continue ကိုကလစ်ပါ...
၉) SetaNew Security Question ထဲမှာရှိတဲ့ Choose A security Question မှာကြိုက်တာရွေးပြီး အောက်မှာအဖြေတခုခုထည့်ပေး
လိုက်ပါ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ အဖြေကိုတော့မှတ်ထားသင့်ပါတယ် နောက်ပိုင်း အကောင့်ပျောက်ရင် အဲ့ဒီ အဖြေနဲ့ပြန်ယူလို့ရပါတယ်.
ပြီးရင် Submit ကိုကလစ်ပါ....
၁၀) နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Account Unlocked - Now You Can Log In ဆိုတဲ့ page ရဲ့အောက်ဆုံးက Log In ကိုကလစ်လိုက်ရင်တော့
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ပျောက်နေတဲ့ Facebook account ကိုပြန်လည်ရရှိသွားမှာပါ.....အကယ်လို့ Log In ကိုမနှိပ်ခင် Send me an email if someones log into my account from an unknown device ကိုသာအမှန်ခြစ်ပြီး ရွေးထားမယ် ဆိုရင် နောက်ပိုင်း တခြားသူတယောက်ယောက်က ကိုယ့်အကောင့်ကိုခိုးပြီး သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ သုံးနေကျ ကွန်ပြူတာကနေမဟုတ်ဘဲ တခြား ကွန်ပြူတာကနေ ၀င်သုံးနေမယ်ဆိုရင် တော့ email ကဆင့်စာပို့ပြီး သတိပေးသွားမှာပါ... အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်...
8:35:00 am ဆော့ဝဲ No comments
G-Talk ကနေ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းတောင်းဆို နားဆင်နိုင်သော အွန်လိုင်း ရေဒီယိုအစီအစဉ်..
11:56:00 pm Gtalk No comments
အိပ်မက်လှိုင်းရေဒီယို အတွက် မိမိကွန်ပျူတာရှိ Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ
အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယို အတွက် Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ
MYMC (Myanmar Youth Media Club) ရေဒီယိုအတွက် Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ကွန်ပျူတာမှာ Android APK Logo တွေ ကြည့်လို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်
11:13:00 pm Computer No comments
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ Android Apps APK ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး
ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖိုင်အဖြူရောင်လေးတွေပဲ မြင်ရပါတယ်။ ဖိုင်နာမည်တွေကလည်း တစ်ချို့က
ပြောင်းရေးထားကြတော့ ဘယ် ဆော့ဝဲလ်က ဘယ်ဟာမှန်းမသိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်..အဲဒီတော့
ကိုယ့် ကွန်ပျူတာမှာ Android APK Logo တွေ ကြည့်လို့ရဖို့အတွက် အောက်ပါဆော့ဝဲလ်လေးကို
Install လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ..
ဂျပန်စာလား တရုတ်စာလားတော့ မသိဘူး။ သူပေါ်လာပေးတဲ့အတိုင်းသာ လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ apk ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ကပုံလေးလို မြင်ရပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။